ထရိုင်ဂူလယ် ဂယ်လက်ဆီ - ဝီကီပီးဒီးယား
၃ လေ့လာမှု သမိုင်းကြောင်း
↑ Brunthaler, Andreas; Reid, Mark J.; Falcke, Heino; Greenhill, Lincoln J.; et al. (2005). "The Geometric Distance and Proper Motion of the Triangulum Galaxy (M33)". Science 307 (5714): 1440–1443
↑ "Triangulum Galaxy Snapped by VST"၊ ESO Press Release။7August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထရိုင်ဂူလယ်_ဂယ်လက်ဆီ&oldid=407001" မှ ရယူရန်
၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၉:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၉:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။